Lionel Messi Oo Maray Baadhitaankii Caafimaad Ee Uu Hore U Diiday, Xarunta Tababarka Oo Aanu Wali Tagin-Goormay Kulmayaan Tababarihii Ka Cadhaysiiyay Ee Ronald Koeman? - Gool24.Net
Lionel Messi Oo Maray Baadhitaankii Caafimaad Ee Uu Hore U Diiday, Xarunta Tababarka Oo Aanu Wali Tagin-Goormay Kulmayaan Tababarihii Ka Cadhaysiiyay Ee Ronald Koeman?
September 6, 2020 Mahamoud Batalaale
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ugu danbayn maray tijaabada caafimaadka kooxdiisa oo uu hore u diiday markii uu ku taagnaa go’aannkii uu ku doonayay in uu kooxda ka baxo.
Isniintii la soo dhaafay ciyaartoyda kooxda Barcelona ayaa maray baadhitaanka PCR ee karoona fayras looga hubinayay laakiin Lionel Messi ayaa markaas iska diiday in uu maro maadaama oo uu doonayay in uu kooxda iskaga baxo.
Laakiin maanta waxa uu Lionel Messi maray tijaabada caafimaadka PCR si looga hubiyo fayraska karoonaha laakiin muu tagin xarunta tababarka Barcelona balse taas badalkeeda waxaa gurigiisa loogu diray koox shaqaalaha caafimaadka ah si ay Messi tijaabada uga soo qaadaan.
Barri oo isniin ah waxaa soo bixi doonta natiijada baadhitaanka Lionel Messi looga qaaday PCR waxaana la ogaan doonaa haddii uu bad qabo iyo haddii kale.
Tababare Ronald Koeman oo hadda isku qoomamaynaya kalmadihii qalafsanaa ee uu Lionel Messi u adeegsaday markii uu gurigiisa kula kulmay ayaa isniinta barri xarunta tababarka ku soo dhawayn doono xidiga reer Argentina haddii natiijada baadhitaankiisu ay negative noqoto.
August 25 ayay ahayd markii uu Lionel Messi kubbada cagta ku gilgilay go’aankii uu ku shaaciyay bixitaankii uu ku doonayay in uu Camp Nou si xor ah kaga dhaqaaqo laakiin 11 maalmood oo is jiid-jiid badani jiray waxa uu jimcihii la soo dhaafay badalay go’aankiisii hore isaga oo hal sano kooxda sii joogi doona.
Haddii baadhitaanka Lionel Messi maanta lagu sameeyay uu noqdo mid natiijo fiicani ka soo baxdo waxa uu barri oo isniin ah markii ugu horaysay ka soo muuqan doonaa xarunta tababarka kadib dhul gariirkii uu kooxdiisa Barca ku abuuray.
Hal usbuuc kadib waqtigii laga filayay in Lionel Messi uu ka soo muuqdo xarunta tababarka Barcelona ayuu qayb ka soo noqon doonaa iyada oo Ronald Koeman uu markii ugu horaysay arki doono Messi oo kooxdiisa tababarka la qaadanaya.
Ronald Koeman oo jeebka ku sitay qorshaha laga qayliyay ee madax wayne Bartomeu ayaan wax wanaag ah u sii dhigan Lionel Messi iyo xidigo badan oo kooxda ka tirsan oo uu u sheegay in ay kooxo soo raadsadaan.
Laakiin Lionel Messi ayaa xarunta tababarka Barca ku soo laaban doona isaga oo maanka ku haya in uu luminayo saaxiibkiisii ugu dhawaa ee Luis Suarez kaas oo la filayo in uu Juventus u wareegi doono.
Ronald Koeman ayay culays wayn ku noqon doontaa in Lionel Messi oo aan faraxsanayn uu qolka labiska iyo xarunta tababarka ku haysan doono inkasta oo xidiga reer Argentina uu balan ku qaaday in uu wax walba kooxda u huri doono sanadka uu sii joogayo.